မြင့်မြတ်နာမည်သုံးပြီး ငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုလာတဲ့ စိစိ
ဘုန်းကြီးကျောင်း ၂ ကျောင်း အလိမ်ခံလိုက်ရပြီးပါပြီတဲ့။
ပြည်မြို့ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းများနဲ့ သီလရှင်ကျောင်းများ၊ ပရဟိတကျောင်းများကို သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်နာမည်ကို အသုံးပြုပြီး ငွေကြေးလိမ်လည်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ ဟာသသရုပ်ဆောင် စိစိက ပြောပါတယ်။
Photo: Si Si
ဟာသသရုပ်ဆောင် စိစိက ပြည်မြို့မှာရှိတဲ့ ရတနာမဉ္ဇူရီမိဘမဲ့ ပရဟိတကျောင်းက ဆရာလေးကျေးဇူးကြောင့် သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်နာမည်နဲ့ အလွဲသုံးစားလုပ်နေတဲ့ လူတချို့အကြောင်း အခုလို ဖော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဆရာလေးဆီကို ဆက်သွယ်လာတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ဆက်သွယ်ကြည့်ရာမှာလည်း အစစ်အမှန်တွေ မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
‘’ပြည်မြို့က ရတနာ မဉ္ဇူ ရီ မိဘမဲ့ ပရဟိတ ကျောင်းကို မင်းသားမြင့်မြတ်အသံနဲ့ဆန်အိမ် (163 ) ဆိုပြီး ဆရာ လေးကို ဖုန်းဆက်သည်။ နေ့လယ်ကျတော့ ဆန်အိမ်တင်တဲ့ ကားက ဟမ်းရောက်နေတယ်ဆိုပြီး နယ်ကျွန်သွားလို့ဆရာလေးကို ငွေ(2 )သိန်းလွဲခိုင်းတယ်။ ဆရာလေးက စဉ်းစားတွေးမိပြီး ပြည်သား ဟာသ သရုပ်ဆောင် စိစိ ( ပြည် ) ဆီသို့ဖုန်းဆက်ပေးလိုက်တော့ ကိုစိဘယ်မှာလည်း ကျွန်တော်ကပြင်ဦးလွင်မှာ လို့ပြောလိုက်တော့ ဆရာလေးက မြင့်မြတ်က ဆန်လူူမယ်ဆိုတာ ဟုတ်လားလို့မေးပေးပါဆိုတော့ ကျွန်တော်က ညီလေးမြင့်မြတ်ဖုန်းနံပါတ်ပြော ဆို တော့ 09 ??????? ဖုန်းနဲ့ ဆက်တာ ဒီဖုန်းသည် မင်းသားမြင့်မြတ် ဖုန်းနံပါတ် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်လည်း ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ကြည့်တော့ လာပြီးကိုင်ပါတယ်။ ညီလေး မြင့်မြတ်က ဆန် ပြည်ပရဟိတကျောင်းကို လူူမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဆိုတော့ တိုက်ခန်းထဲကအသံဖြင့် ဟုတ်တယ်ဗျာ ကျွန်တော် ကိုမြင့်မြတ်ကို မေးပေးပါမယ်လို့ အခန်းပြင်ထွက် သွားပြီး ပြန်လာသလိုနဲ မင်းသားက နောက်တစ်နာရီမှ ဖုန်းဆက်ပါ။ ကျွန်တော် သူမန်နေဂျာ စတီးဆိုပြီးဖုန်းကျသွားပါတယ်’’ လို့ အစချီပြီး ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို လိမ်လည်နေမှုတွေကေို မြင့်မြတ်ရဲ့ မန်နေဂျာကိုယ်တိုင်ကလည်း သိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ စိစိက ပြောပါတယ်။ လိမ်လည်သူတွေဟာ နာမည်ကျော်ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ အမည်တွေ၊ နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်များစွာတို့ရဲ့ အမည်နဲ့ လုပ်စားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
‘’ကျွန်တော်ထပ်ပြီး မြင့်မြတ်မန်နေဂျာ ( အစစ် မောင် ??? ) ဆီ ဖုန်း ဆက်တော့မဟုတ်ကြောင်း ဒီကိစ္စ ကို မနက်ထဲက ဘုန်းကြီးကျောင်း နှစ်ကျောင်းအား လုပ်စားသွားကြောင်းသိရသဖြင့် ပြည်မြို့ဆရာ လေးအား မလွဲပေးရန်နဲ့ လိမ်လည်လုပ်စားနေကြောင်းသိသဖြင့် ပြည်မြို့မှာ ပြည်သစ္စာ အကူညီဖြင့် အသိပေး ရန်အကူညီတောင်းခံ ခဲ့ပါကြောင်း ဆရာ လေးဆက်သွယ်သော ဖုန်းများအားလုးံမှာ ပြန်လည်ခေါ်ကြည့်ရာ စက်ပိတ်ထားပါသည်။ လိမ်လည် လုပ်စားသူသည် ဆရာတော်ကြီးနာမည်အမျိူ းမျိူ းနဲ့အနုပညာ နာမည်များကိုအလွဲသုးံစားလုပ်ပြီး လုပ်စားနေပါသဖြင့် သတိရှိ ပြီး တွေးခေါ်နိုင်ကျစေရန် အသိပေးတင်ပြအပ်ပါသည်။ ဟာသသရုပ်ဆောင် စိစိ ( ပြည် )09791738817’’ လို့ ဆက်လက် ပြောထားပါသေးတယ်။
စိစိကိုတော့ ပရိသတ်တွေက လူရွှင်တော်တစ်ယောက်အဖြစ် စတင်သိရှိခဲ့တာပါ။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၊ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေမှာလည်း ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံ တစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ သရုပ်ဆောင် ရွှေသမီး နဲ့ ပြင်ဦးလွင်မှာ ရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။